Lego Star Wars Luke's Lightsaber Black Friday GWP သတင်း
18 / 09 / 2021 19 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 467 Views စာ 1 မှတ်ချက် 40483 မှာ Imperial စတား Destroyer, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, 5006290 Yoda ၏ Lightsaber, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, Lego, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, Lightsaber, လုကာ Skywalker, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Star Wars
အသစ် Lego Star Wars GWP သည် Luke Skywalker ၏အထင်ကရ lightsaber ကိုအခြားသတင်းပေးပို့ပုံစံတစ်ခုနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဖော်သည်။
Instagram အသုံးပြုသူ 1414FalconFan သည်အခြားတစ်ယောက်နှင့်ပြန်လာသည် Lego ကောလာဟလ၊ ဒီတခါတော့အလကားပဲလို့ပြောတယ် Star Wars ဒီနှစ်ကုန်မှာလာမယ့် Luke Skywalker ရဲ့မီးလုံးတစ်လုံးကိုပြန်တည်ဆောက်ပါ လူကြီးများအတွက် Lego အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံစံ
ဘာကိုမှအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး Lego ကြေငြာချက်မတင်မချင်းဒီကောလဟာလတွေကိုအုပ်စုလိုက်သတိထားသင့်တယ်။ အစီရင်ခံစာအရအစုံကို 40483 Luke's Lightsaber ဟုအမည်ပေးထားပြီး၎င်းနှင့်ဆင်တူသော black box တစ်ခုပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား၎င်းသည်နောက်ထပ် ၁၈+ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည် Lego Star Wars မော်ဒယ်လို 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း.
အဆိုပါ Lego Group သည်အလားတူ lightsaber အခမဲ့လက်ဆောင် ၅၀၀၆၂၉၀ Yoda's Lightsaber နှင့်အတူရောက်လာသည် ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်သည် of ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina VIPs များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးစတင်သောအခါ၊ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ဒါဟာစျေး ၀ ယ်အများစုအတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မရ။ ထိုလက်နက်ကိုအသက်အရွယ်အတိုင်းအတာဖြင့်ခင်းကျင်းပြသနေစဉ်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ကောလဟာလလက်ဆောင်သည်လိုက်မည်လားဆိုသည်ကိုပြောစရာမရှိချေ။
အင်စတာဂရမ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကမော်ဒယ်သည်၎င်းနှင့်အတူရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် UCS AT-AT ကိုတင်ပြခဲ့သည် startနိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့. ၎င်းသည် 40483 နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် အခြားကောလာဟလများနှင့် ကွဲလွဲနေပါသည်။ Star Destroyer လက်ဆောင်ဖြင့်ဝယ်ယူပါမရ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မည်သည့်အရာကိုမျှအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေ။
မှလည်းထွက်ပေါ်နေသည် lego_club_news အခြားလေးယောက် Star Wars ၂၀၂၂ အတွက်စီစဉ်ထားသောအစုံသည်ယခုအချိန်တွင်နံပါတ်များနှင့်စျေးနှုန်းများသာဖော်ပြနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ စာရင်းတွင် ၇၅၂၃၄ ဒေါ်လာ ၃၀၊ ၇၅၃၃၆ အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၊ ၇၅၃၃၉ အတွက် ၈၀ နှင့်ဒေါ်လာ ၈၀ အတွက် ၇၅၃၃၀ တို့ပါဝင်သည်။
အနာဂတ်အကြောင်းငါတို့သိတဲ့အခါမင်းကိုအသိပေးလိမ့်မယ် Lego Star Wars အကြောင်းအရာစုဆောင်းသူများအတွက်စျေးကြီးသောလအနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
← LEGO သည်ရုပ်ရှင်ထွက်လာသောအခါ Ghostbusters အတွဲများပြုလုပ်လျှင်ဘာဖြစ်မလဲ။
ယနေ့အုတ်ပုံ - Long Jump →
တစ်ခုမှာ "Lego Star Wars Luke's Lightsaber GWP သည်ကောလာဟလများထွက်ခဲ့သည်"
19/09/2021 at 02:51
Luke's lightsaber hilt ရဲ့ပုံစံကိုရတာထက်ငါပိုပျော်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါတို့အရင်ကမျှော်လင့်ထားတဲ့အသေးစားကြယ်ဖျက်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဝမ်းနည်းတယ်။